၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပွဲစဉ်ဇယား ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲ
4 Jun 2018 . 2:01 PM
၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲစဉ်ဇယားကို တရားဝင်ကြေညာခြင်း မရှိသေးခင်မှာဘဲ ပေါက်ကြားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲစဉ်အားလုံး ပေါက်ကြားခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်တွေ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်ကတစ်ဆင့် ပေါက်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ သတင်းအရ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲကို သြဂုတ်လ (၁၁)ရက်နေ့မှာ စတင် ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုအရ အဆင်ပြေစေရန် အသင်းကြီးအချင်းချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမရှိအောင် ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်ပေါက်ကြားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာ မှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိကို ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက ထုတ်ပြန်ခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲစဉ်ဇယား တရားဝင် ထုတ်ပြန်မှုကို လာမယ့် ဇွန်လ (၁၄)ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်မှုမပြုလုပ်ခင် (၁၁)ရက်အလိုမှာ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်တွေ ပေါက်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ သတင်းတွေအရ လက်ရှိ ချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းက အဲဗာတန်အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီး မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်ယူအသင်းကတော့ ဆောက်သမ်တန်အသင်းရဲ့ စိန့်မေရီကွင်းမှာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါက်ကြားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်
ဖူလ်ဟမ် – နယူးကာဆယ်
လက်စတာ – ဝက်ဖို့ဒ်
ဝုလ်ဗ် – ချယ်လ်ဆီး
အာဆင်နယ် – ဘရိုက်တန်
မန်စီးတီး – အဲဗာတန်
ဘန်လေ – စပါး
လီဗာပူးလ် – ဝက်စ်ဟမ်း
ဘုန်းမောက် – ကာဒစ်ဖ်
ဟတ်ဒါဖီးလ် – ခရစ္စတယ်လ်ပဲလေ့စ်
ဆောက်သမ်တန် – မန်ယူ
၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပှဲစဉျဇယား ပေါကျကွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲ
၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ ပှဲစဉျဇယားကို တရားဝငျကွညောခွငျး မရှိသေးခငျမှာဘဲ ပေါကျကွားမှုဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ ပှဲစဉျအားလုံး ပေါကျကွားခဲ့တာ မဟုတျဘဲ ရာသီအဖှငျ့ပှဲစဉျတှေ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြကတဈဆငျ့ ပေါကျကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ပေါကျကွားခဲ့တဲ့ သတငျးအရ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျအဖှငျ့ပှဲကို သွဂုတျလ (၁၁)ရကျနမှေ့ာ စတငျ ယှဉျပွိုငျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပေါကျကွားခဲ့တဲ့ ရာသီအဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ ရုပျသံထုတျလှငျ့မှုအရ အဆငျပွစေရေနျ အသငျးကွီးအခငျြးခငျြး ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှုမရှိအောငျ ရေးဆှဲခဲ့တာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ ရာသီအဖှငျ့ပှဲစဉျပေါကျကွားမှု ဖွဈပှားခဲ့တာ မှနျကနျမှုရှိ၊ မရှိကို ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ တာဝနျရှိသူတှကေ ထုတျပွနျခွငျးတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ ပှဲစဉျဇယား တရားဝငျ ထုတျပွနျမှုကို လာမယျ့ ဇှနျလ (၁၄)ရကျနမှေ့ာ ပွုလုပျသှားမှာဖွဈလို့ တရားဝငျ ထုတျပွနျမှုမပွုလုပျခငျ (၁၁)ရကျအလိုမှာ ရာသီအဖှငျ့ပှဲစဉျတှေ ပေါကျကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ပေါကျကွားခဲ့တဲ့ သတငျးတှအေရ လကျရှိ ခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးက အဲဗာတနျအသငျးကို အိမျကှငျးမှာ လကျခံ ကစားသှားရမှာဖွဈပွီး မွို့ခံပွိုငျဘကျ မနျယူအသငျးကတော့ ဆောကျသမျတနျအသငျးရဲ့ စိနျ့မရေီကှငျးမှာ သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပေါကျကွားမှု ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ရာသီအဖှငျ့ပှဲစဉျ
ဖူလျဟမျ – နယူးကာဆယျ
လကျစတာ – ဝကျဖို့ဒျ
ဝုလျဗျ – ခယျြလျဆီး
အာဆငျနယျ – ဘရိုကျတနျ
မနျစီးတီး – အဲဗာတနျ
ဘနျလေ – စပါး
လီဗာပူးလျ – ဝကျဈဟမျး
ဘုနျးမောကျ – ကာဒဈဖျ
ဟတျဒါဖီးလျ – ခရစ်စတယျလျပဲလစျေ့
ဆောကျသမျတနျ – မနျယူ
by Ko Kyue . 32 mins ago